आज आईपीएल फाइनल : मुम्बई र दिल्ली मध्ये उपाधि जित्ने पालो कस्को ? | शुभयुग
आज आईपीएल फाइनल : मुम्बई र दिल्ली मध्ये उपाधि जित्ने पालो कस्को ?
एजेन्सी – इन्डियन प्रिमियर लिग ९आईपीएल० टी-ट्वान्टी क्रिकेटको आज फाइनलमा मुम्बई इण्डियन्स र दिल्ली क्यापिटल्सबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।
नेपाली समय अनुसार आझ साँझ ७:४५ बजेवाट, दुबईमा मुम्बई र दिल्लीबीचको फाइनल खेल हुनेछ । दुबई अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा मुम्बई र दिल्ली उपाधि उचाल्ने लक्ष्यसहित मैदान उत्रने छन् ।
आजको मुम्बई र दिल्लीबीचको फाईनल खेल निकै रोमान्चक हुने अनुमान समेत गरिएको छ । रोहित शर्माको कप्तानीमा मैदान उत्रने मुम्बई आईपीएलकै सर्वाधिक सफल टिम हो । यसअघी मुम्बईले सर्वाधिक ४ पटक आईपीएल उपाधि जितेको छ ।
त्यस्तै दुबईमा दिल्लीलाई हराएर मुम्बई पाँचौ उपाधि आफ्नो बनाउन चाहन्छ । तर, श्रेयस अयरको कप्तानीमा मैदान उत्रने दिल्लीको इतिहास भने मुम्बईको ठिक विपरित रहेको छ ।
उता दिल्लीले आईपीएलको उपाधि जित्न सकेको छैन । यसपटक दिल्ली आईपीएलकै इतिहासमा पहिलो पटक फाइनल समेत पुगेको हो । त्यसैले दिल्ली मुम्बईलाई हराएर इतिहास रच्दै पहिलो उपाधि जित्न चाहन्छ । बलियो मुम्बईविरुद्ध जित निकाल्न दिल्लीलाई सहज भने छैन । तर, दिल्ली अघिल्ला तीन खेलमा व्यहोरेको हारको बदला लिन चाहन्छ ।
लिग चरणको पहिलो खेल मुम्बईले दिल्लीमाथि ५ र दोस्रो खेल ९ विकेटको जित निकालेको थियो । यस्तै पहिलो क्वालिफायरमा दिल्लीलाई ५७ रनले हराएर मुम्बई फाइनलमा पुगेको हो ।
पहिलो क्वालिफायरमा हार व्यहोरे पनि दिल्लीले दोस्रो क्वालिफायरमा जित निकाल्दै पुनः मुम्बईसँगको भेट पक्का गरेको हो । दिल्लीले दोस्रो क्वालिफायरमा सनराइजर्स हैदराबादलाई १७ रनले हराएको थियो ।
दिल्लीबाट लगातार तेस्रो सिजन आईपीएल खेलिरहेका नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले फाइनलमा खेल्न पाउने सम्भावना निकै कम रहेको छ ।
यस वर्ष सन्दीपले मैदान उत्रने मौका पाएका छैनन् । उनी बेन्चमै सिमित हुँदै आइरहेका छन्